HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Danoà Espaniola Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Tsonga Xhosa Zoloa
MANILLE, any Philippines—Nandravarava an’i Philippines ilay Rivo-doza Haiyan (na Yolanda any Philippines), tamin’ny 8 Novambra 2013. Io no anisan’ny rivo-doza mahery vaika indrindra nandalo tany.
Araka ny tatitra nataon’ny biraon’ny sampan’i Philippines any Manille, tamin’ny 13 Novambra 2013, dia Vavolombelon’i Jehovah 27 no namoy ny ainy, trano 100 mahery an’ny Vavolombelona sy trano fivavahana 5 no rava.
Avy any Brooklyn any New York ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah no mandrindra ny fikarakarana an’ireo tra-boina any amin’ny toerana niharan-doza eran-tany. Tafiditra amin’izany fandaharana izany ny fanampiana an’i Philippines. Efa niezaka mafy ny biraon’ny sampana any mba hizara sakafo, rano, fanafody, ary zavatra hafa any amin’izay toerana niharan-doza. Nisy fanampiana folo kamiao nozaraina tamin’ny alahady 10 Novambra, ary mbola nisy kamiao maro hafa koa nanainga ny ampitson’iny.
Mbola tsy tafarina akory i Philippines tamin’io, satria vao avy nandalovan’ny horohoron-tany nirefy 7,2 tamin’ny 15 Oktobra 2013. Olona 218 no maty tamin’izay. Araka ny tatitra voaray, dia Vavolombelon’i Jehovah telo no maty tamin’io, ka ny iray nihotsahan’ny tany ary ny roa nianjeran’ny trano. Taloha kelin’io horohoron-tany io anefa no nandalo ny Rivo-doza Nari, izany hoe tamin’ny 12 Oktobra 2013, ary olona 13, fara fahakeliny, no maty.
Ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah no misahana ny lany amin’ny fanampiana an’ireo tra-boina, ka ny vola fanomezana ho an’ny asa maneran-tany no ampiasainy amin’izany. Izy ireo koa no mandinika raha misy ilana mpiasa an-tsitrapo any amin’ilay toerana. Miara-miasa amin’ny sampana maneran-tany izy ireo avy eo mba hanendrena an’izay mpiasa an-tsitrapo mahafeno fepetra hanampy. Miara-miasa amin’ny manam-pahefana sy mpamonjy tra-boina hafa any amin’ilay toerana ireo olona ireo.
Hoy i Dean Jacek, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah any Philippines: “Malahelo be daholo izahay satria be dia be no maty tamin’ireny loza nisesisesy ireny. Tena mila fampaherezana ireo niharam-boina satria rava ny tranony ary mikorontana ny fiainany. Miezaka foana izahay manao izay azonay atao mba hanampiana an’ireo namanay sy mpiara-monina aminay, sady mampahery azy ireo amin’ny alalan’ny Soratra Masina.”